Punta Cana - သိမြင်ရန် အရေးကြီးသော အရာများ Absolut ခရီးသွား
Punta Cana ခရီးစဉ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများ
Susana godoy | | ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ
Punta Cana သည် အလိုအပ်ဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဟု ပြောနေစရာ မလိုပေ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ နာမည်ကို ဖော်ပြလိုက်ရုံနဲ့ ခရီးသွား အများစု လိုချင်တဲ့ ကမ်းခြေတွေ ဖြစ်တဲ့ သာယာ တဲ့ ကမ်းခြေ တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရ ပေမယ့် အဲဒီ့ နေရောင် ၊ သဲ နဲ့ စိမ်းပြာရောင် ရေပြင် ရဲ့ ထောင့် တွေကို ခံစား ရတာ က အမှန်ပါပဲ ။ Punta Cana ခရီးစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဆုံးမရှိကြည့်ရှုရန်အရာများဖြင့် ထားရစ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သင်လွမ်းဆွတ်နေမည်လား။
ဖြစ်နိုင်ရင် မင်းမှာ အကြံရှိတယ်။ ၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းခြေအချို့ကိုခံစားပါ၊ ၎င်းသည် Punta Cana အားလပ်ရက်များအကြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အားလပ်ရက်တွေကို နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့် သင်နှစ်သက်မယ့် တခြားရွေးချယ်စရာတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ကိုစရမလဲ မသိရင် စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့က မင်းအတွက် အလုပ်ပြီးပြီ။ လုံးဝမပိတ်မီ၊ ရွေးချယ်ရန် မမေ့ပါနှင့် လေယာဉ်နှင့်ဟိုတယ် Punta Cana. အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် အရာအားလုံးကို ကောင်းစွာပိတ် သို့မဟုတ် ချည်နှောင်ထားခြင်းဖြင့် လုံခြုံမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခု ဟုတ်ကဲ့၊ ကြိုဆိုပါတယ် သို့မဟုတ် သင့်အားလပ်ရက်ကို ကြိုဆိုလိုက်ပါ။
1 အားလုံးပါဝင်သော အားလပ်ရက် ပက်ကေ့ချ်ဖြင့် Punta Cana သို့ သင့်ခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ပါ။
2 ပထမဆုံးအကြံပြုထားသော လေ့လာရေးခရီး- Los Haitises အမျိုးသားဥယျာဉ်
3 Isla Saona သို့သွားရောက်လည်ပတ်
4 Catalina ကျွန်းတွင် ရေငုပ်ခြင်း။
5 ဆန်တိုဒိုမင်ဂို၊ ယဉ်ကျေးမှုအရှိဆုံး လည်ပတ်မှု
6 Punta Cana တွင် သင်လေ့ကျင့်နိုင်သော အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုများ
အားလုံးပါဝင်သော အားလပ်ရက် ပက်ကေ့ချ်ဖြင့် Punta Cana သို့ သင့်ခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ပါ။
ယခင်ကထက် သင့်ကိုယ်သင် ပိုပျော်နိုင်စေရန် ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာ အားလုံးပါဝင်သော Punta Cana အားလပ်ရက်ကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးပါဝင်သည့် နေရာထိုင်ခင်း စည်းမျဉ်းများရှိသည်ကို ထိုမှသာ သိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနည်းအားဖြင့် သင်စိတ်ပါဝင်စားသည့် လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ပျော်မွေ့ရန်သာ အာရုံစိုက်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ စားရမည်ကို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ ပိုမိုစိတ်အေးလက်အေး ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, အခြားကိစ္စများတွင် Punta Cana ရှိဟိုတယ်များအကြောင်းပြောသောအခါ၊ ၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောသက်တောင့်သက်သာရှိမှုများကိုဖော်ပြရန်လိုသည်။. ဆိုလိုသည်မှာ သင် အပြင်ထွက်ရန် မလိုအပ်သည့် နေ့ရက်များ ရှိလာမည် ဖြစ်သောကြောင့် သင်လိုချင်သမျှကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟိုတယ်ကြိုတင်မှာယူမှုပြုလုပ်တဲ့အခါ၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ်နဲ့ Punta Cana ဟိုတယ်ကို အဓိကအာရုံစိုက်တဲ့ အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်စရာတွေထဲက တစ်ခုကိုလည်း စဉ်းစားရပါမယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အိုင်ဒီယာတစ်ခုကတော့ ခရီးမထွက်ခင် အရေးကြီးဆုံး အဆင့်နှစ်ဆင့်ကို ပိတ်လိုက်မယ်။ ဤနည်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတမ်းကြိုဆိုနေမည့် ကမ်းလှမ်းမှုများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
ပထမဆုံးအကြံပြုထားသော လေ့လာရေးခရီး- Los Haitises အမျိုးသားဥယျာဉ်
Punta Cana သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်အတွက် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အခြေချပြီးသည်နှင့် စွန့်စားမှုစတင်ပါမည်။ လည်ပတ်စရာနေရာများထဲမှ တစ်ခုနှင့် စတင်သည့် စွန့်စားခန်း။ ဤသည်မှာ Samaná ပင်လယ်အော်တွင်ရှိသော အမျိုးသားဥယျာဉ်ဖြစ်သည်။. ထိုဧရိယာရှိ အပန်းဖြေစခန်းများအားလုံးနှင့် ဝေးကွာသော ဧရိယာကို သင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 'mogotes' ဟုခေါ်သော မြင့်မားသော ကုန်းမြေများ သို့မဟုတ် သဘာဝက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မြင့်မားသော ကုန်းမြေများ ကို သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သင်သည် ပင်လယ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး လျှို့ဝှက်ချက်များ ပြည့်နှက်သော်လည်း အလွန်လှပသော ဤအိမ်ကဲ့သို့သော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် မတူညီသော လိုဏ်ဂူများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Isla Saona သို့သွားရောက်လည်ပတ်
အပျော်ခရီးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရင်းမှာ စွန်ပလွံပင်များ ပြည့်နှက်နေသော လှပသောကမ်းခြေများ ရှိသောကြောင့်သာမကဘဲ သန္တာကျောက်တန်းများဖြင့်လည်း လိုက်ပါသွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Punta Cana ရှိ ဟိုတယ်များတွင် ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်အရှိဆုံး ပက်ကေ့ဂျ်များ သို့မဟုတ် အားလပ်ချိန်များတွင် ပေါင်းစပ်ထားရန်မှာ မလွဲမသွေပင်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် အလွန်ဆိတ်ငြိမ်သော တံငါရွာဖြစ်သည့် Mano Juan ကိုတွေ့ရပါမည်။၎င်း၏အရောင်အသွေးစုံလင်သောအခန်းများနှင့် လိပ်ဘေးမဲ့တောဖြစ်လာခြင်းကြောင့် သင့်အား အနိုင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Catalina ကျွန်းတွင် ရေငုပ်ခြင်း။
သင်သွားလည်လို့ရတဲ့ နောက်ထပ်ကျွန်းကတော့ ဒီကျွန်းပါပဲ။ 1494 ခုနှစ်တွင် Christopher Columbus က သူ့ကို Catalina ဟု အမည်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ရေငုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ထိုသို့သော လူကြိုက်များသော ဒေသများတွင် အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသော အရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်းတစ်ဝိုက်မှာ လမ်းလျှောက်ပြီးရင် လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းလုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ သဘာဝတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သူ့ရဲ့အမြင်တွေကို သင် သဘောကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ဆန်တိုဒိုမင်ဂို၊ ယဉ်ကျေးမှုအရှိဆုံး လည်ပတ်မှု
တစ်နေ့ သင် စောစောထပြီး ယဉ်ကျေးမှု ခရီးစဉ်တစ်ခု လုပ်ချင်ပါက၊ Santo Domingo သို့ သွားခြင်းကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ Punta Cana မှ ကားဖြင့် သုံးနာရီခန့်ကြာသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါနဲ့ အများကြီးတန်လိမ့်မယ်။ ကာရေဘီယံတစ်ခုလုံးရှိ ရှေးအကျဆုံးမြို့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် တံတိုင်းကာထားသော သမိုင်းဝင်စင်တာတစ်ခုနှင့် ၁၆ ရာစုမှ စတင်ခဲ့သော အဆောက်အအုံများလည်း ရှိသည်။ ဤနေရာ၌ သင်သည် ပထမဆုံး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် ရဲတိုက်တို့ကို ခံစားနိုင်သည်။ အမေရိကမှာရှိတယ်။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်တာ မဆန်းပါဘူး။
Punta Cana တွင် သင်လေ့ကျင့်နိုင်သော အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုများ
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အပေါများဆုံးသော ကမ်းခြေတစ်ခုစီတွင်၊ သင်သည် အမြဲတမ်း နေပူခံ သို့မဟုတ် ရေချိုးနေမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ အထူးလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ အချိန်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ ရေငုပ်တယ်လို့ ပြောဖူးပေမယ့် လေးထောင့်ကွင်း ဒါမှမဟုတ် မြင်းစီးတဲ့ သဲသောင်ပြင်တွေကို ဖြတ်လျှောက်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ဘာကို ပိုလိုချင်လဲ။ ဧရိယာပေါ်တွင် ပျံသန်းနိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လှိုင်းစီးလေ့ကျင့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။. သံသယမရှိဘဲ၊ အရသာတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ Punta Cana လေယာဉ်နှင့် ဟိုတယ်တို့သည် ထုပ်ပိုးမှုတွင် အတူတကွသွားနိုင်ပြီး သင့်အား သက်သာရာရစေသောကြောင့် အိပ်မက်အားလပ်ရက်တွင် အလောင်းအစားလုပ်ပြီး သင့်အိတ်ကပ်အတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။ ငါတို့ ထုပ်ပိုးသွားမှာလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » Punta Cana ခရီးစဉ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများ